Fahasalamana : mirongatra ny areti-maso | NewsMada
Fahasalamana : mirongatra ny areti-maso
Betsaka ireo lasibatry ny areti-maso tato anatin’ny roa herinandro izay. Marobe ireo tonga eny amin’ny dokotera manao fizaham-pahasalamana momba ny maso.
Malailay ny maso, mivoaka ranomaso matetika, menamena be ary mivoaka tsiranoka madinty sy mavomavo afaka roa andro. “Mifindra izy io”, hoy ny dokotera iray anisan’ny nitondrana marary, omaly, ka mila mailo.
Tsy tokony hokosehina ny maso na malailay aza. Vao mainka mampivoraka ny voamaso izany ka manasarotra ny fitsaboana raha ny soso-kevitry ny dokotera. Tsy tokony hiandry ela ireo marary maso fa mila mandeha dokotera mampiasa fanafody tsy hampiparitaka ny aretina amin’ny ao an-trano, raha ny fanazavana.
Matetika, misy valanareti-maso toy izao aorian’ny fandalovan’ny rivodoza. Tsy mifidy na lehibe na ankizy fa tratran’ity areti-maso ity avokoa. Nilaza anefa ny dokotera fa toy ny areti-maso efa mahazatra ihany fa tsy misy atahorana be loatra ity miseho sy miparitaka ity.
Tsiahivina fa efa niseho tany atsinanan’ny Nosy ihany koa ny valanareti-maso izay nateraky ny loto tamin’ny taon-dasa. Saika voan’izany avokoa ny ankamaroan’ny mponina tany, eny fa na ireo vahiny nandalo fotsiny aza.